(tonga teto avy amin'ny Rosia (firenena))
Ny Rosia na ny Federasionan'i Rosia dia fanjakana federaly ary firenena ngeza indrindra eo an-tany, manana mponina miisa 142 tapitrisa any ho any araka ny fanisam-bahoanka natao tamin'ny taona 2007. Misabaka eo amin'i Eorôpa jeografika (25,3%n'ny fivelarany) sy i Azia atsinanana (74,7%) izy. Ny firenena rosiana dia manana velarana 17 tapitrisa km2 (indroan'i Etazonia ary in-30n'i Madagasikara). Manana faritr'ora raika ambin'ny folo izy. Ny renivohiny dia i Môsko, fiteny rosiana ny fiteny ofisialy any ary ny robla no sandam-bola ampiasainy. Atao hoe Россия / Rossiya na Российская Федерация / Rossiyskaya Federatsiya izy amin'ny fiteny rosiana.
Na dia misy ranomasina maromaro aza ny manodidin'i Rosia dia manana toetrandro ara-kontinenta amin'ny tany mangatsiaka sy sarotra ipetrahan'ny olona izy.
Betsaka ny harena an-kibon'ny tany any Rosia: misy ny solitany sy ny vato sarobidy. Mivoatra be ny orinasa mikasika ny fanamboarana sambondanitra sy ny fanamboarana basy. Ny fanamboarana sambondanitra no nahaavoalohany an'i Rosia izay nanti-nizaha ny habakabaka tamin'ny taona 1957.
Ny Repoblika Sosialista Federativan'i Rosia (RSFSR) dia repoblika lehibe indrindra ao tamin'ny Firaisana Sovietika.
Tamin'ny faran'ny taona 1991 dia misy firenena vaovao dimy ambin'ny folo avy amin'ny Firaisana Sovietika taloha, isan'izany i Rosia, izay nandova ny 3/4'ny tanin'ny Firaisana Sovietika taloha (izany hoe 17 tapitrisa km²) sy ny antsasaky ny mponiny sy ny 2/3'ny orinasany ary ny antasaky ny toeram-pamboleny.
1.2 Rosia tao amin'ny Firaisan'ny Repoblika Sosialista Sovietika
5 Kolontsaina ary finoana
Ny fototry ny tantaran'i Rosia dia nanomboka tamin'ny fotoana niforonan'ny Slava, vondrona iray tany Eorôpa teo anelanelan'ny taonjato fahatelo sy fahavalo taor. J.K. Ny Viking sy ny taranany dia nanorina ny fanjakana Slavonianina voalohany tao amin'ny Rosin'i Kieva (rosiana: Киевская Русь / Kievskaja Rus' izany hoe "Fanjakan'i Kieva") tamin'ny taonjato faha-9. Nekeny ny kristianisma avy amin'ny Empira Bizantinina tamin'ny taona 988. Ity endriky ny kristianisma ity dia niantraika tamin'ny kolontsaina rosiana. Rava ny Rosin'i Kieva tamin'ny farany ary nizarazara ho firenena madinika. Ny fanjakana mandroso indrindra tamin'i Rosin'i Kieva dia i Diose Lehiben'i Môsko. Io sehatra io dia hery lehibe indrindra tao anatin'ny fampiraisana an'i Rosia taty aoriana ary ny ady tamin'ny Foko Volamena avy any Azia. Nitombo tsikelikely ny fanaraha-maso ny faritra manodidina an'i Môsko ary naka ny fiainana ara-kolontsaina sy ara-politikan'i Rosin'i Kieva.
Nandritra ny taonjato faha-18 dia nanitatra ny sisin-taniny tamin'ny alalan'ny fandresena sy fitetezana ny firenena ho lasa Empira Rosiana ilay fanjakana fahatelo lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Nipongatra avy tao amin'ny Fitambaram-panjakan'i Polonia-Litoania any atsinanana mankany amin'ny Ranomasimbe Pasifika sy Alaska izy. Io empira io dia nofehezin'ny emperora antsoina hoe Tsar.
Nanjaka tao Rosia i Petera Lehibe (rosiana: Пётр Великий / Piotr Veliki) nanomboka tamin'ny taona 1689 ka hatramin'ny taona 1725. Namindra ny renivohitra avy any Môsiko ho any amin'ny tanàna iray antsoina hoe Saint-Petersbourg (rosiana: Санкт-Петербу́рг / Sankt-Peterburg) i Petera. Nataony ho maoderina kokoa tamin'ny fomba maro ny fiaraha-monina rosiana. Nanomboka nanamboatra sambo ho an'ny tafika rosiana ny governemanta.
Nanomboka tamin'ny taona 1904 ny Ady Rosianina-Japoney ary nifarana tamin'ny taona 1905 niaraka tamin'i Japàna nandresy ny ady. Ny faharesen'ny Rosiana dia isan'ny nampisy ny revolisiona taty aoriana.
Rosia tao amin'ny Firaisan'ny Repoblika Sosialista Sovietika[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny Oktobra 1917, ny Bolisevika (antsoina hoe "Kominista"), izay voatariky ny hevitr'i Karl Marx sy Vladimir Lenin, dia nandray ny firenena ary namono ny Tsar sy ireo olona hafa nijoro nanohitra azy ireo. Vao nandray ny fahefana ry zareo, dia namorona ny fanjakana kominista voalohany ny Bolisevika nentin'i Vladimir Lenin sy Leon Trotsky.
Hatramin'ny taona 1920 ka hatramin'ny 1950, i Josef Stalin no mpitarika mpanao didy jadona tao amin'i Rosia Sovietika, ary nopotehiny avokoa izay rehetra nanohitra ny fitondrany, anisan'izany ny fananan'ny tantsaha sy ny mpivarotra. Olona an-tapitrisany no namoy ny ainy ary maty tao anatin'ny mosary vokatr'izany. Nesorin'i Stalin ihany koa, na "nanadio", ireo miaramila rehetra izay tsy nivadika taminy, ary maro no maty na nalefa tany amin'ny toby famonjana, na gulag, nandritra ny taona maro. Na dia tany amin'ny gulag aza dia maro ny voafonja maty.
I Rosia Sovietika sy ny Nazi dia nanaiky ny tsy hifanandrina tamin'ny taona 1939. Tamin'ny volana Jona 1941, dia nanapaka ny fifanarahana i Alemaina ary nanafika tao amin'ny Operation Barbarossa. Anisan'ny Ady Lehibe Faharoa io fanafihana io. Ny ady dia naharitra tany Eorôpa hatramin'ny Mey 1945, ary olona 200 tapitrisa mahery no namoy ny ainy nandritra izany fotoana izany. Na dia betsaka aza ny Rosianina namoy ny ainy vokatr'io ady io, i Rosia no iray tamin'ireo firenena nandresy ka lasa firenena matanjaka eran-tany.
Tamin'ny taona 1922 ka hatramin'ny 1991, i Rosia no faritra lehibe indrindra tamin'ny Firaisana Sovietika, na ny Firaisan'ny Repoblika Sosialista Sovietika (FRSS). Indraindray ny olona dia nampiasa ny anarana hoe "Rosia" hanondroana ny Firaisana Sovietika manontolo, na indraindray "Rosia Sovietika". I Rosia dia iray amin'ireo Repoblika Sosialista Sovietika miisa 15. Ny tena anaran'io repoblika io dia "Repoblika Sosialista Federativa Sovietika Rosianina" (RSFSR).
Nanjavona ny Firaisana Sovietika tamin'ny fiandohan'ny taona 1990. Naka ny toeran'ny Firaisana Sovietika tao amin'ny Firenena Mikambana (ONU) i Rosia.
Rosia ankehitriny[hanova | hanova ny fango]
I Boris Yeltsin dia voafidy ho filohan'i Rosia tamin'ny Jona 1991, tamin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany teo amin'ny tantara rosiana. Nisy ny fanavaozana goavana natao, anisan'izany ny fizakan-tena sy ny lalàna momba ny varotra. Ny "Fitsaboana Fanairana" dia natolotry ny Etazonia sy ny IMF. Nisy krizy ara-toekarena lehibe taorian'izay. Very 50%n'ny harinkarena faobe i Rosia tanelanelan'ny taona 1990 sy 1995.
Ny tsifampiankinana dia nanjary namintra ny fifehezan'ny orinasa avy amin'ny fanjakana mankany amin'ny olon-tokana manana fifandraisana ao amin'ny rafitra anatin'ny governemanta. Maro tamin'ireo mpandraharaha mpanankarena vao haingana no namoaka vola an'arivony tapitrisa sy fananana any ivelan'ny firenena. Ny fihakelezan'ny herim-panjakana sy ny toekarena dia nitarika ny fandravana ny asa sosialy. Olona an-tapitrisany no nanjary nahantra, 1,5% ny fahantrana tamin'ny vanim-potoanan'ny Sovietika, teo amin'ny 39-49% tamin'ny tapaky ny taona 1993. Ny taona 1990 hatramin'ny 1999 dia nahitana kolikoly sy fandikan-dalàna faran'izay henjana, fiakaran'ny andian-jiolahy ary heloka bevava mahery vaika.
Tamin'ny ady tamin'ny taona 1990 dia maro ny fifandonana mitam-piadiana ao Kaokazy Avaratra. Nisy ady an-trano sy antokom-pivavahana islamista maro samihafa. Hatry ny fanambaran'ireo Tsetsena ny fahaleovan-tenany tamin'ny fiandohan'ireo taona 1990, dia nisy ady anelanelan'ny antoko mpikomy tsetsena sy ny miaramila rosiana. Ny fanafihan'ny mpampihorohoro ny sivily dia nahatonga fahafatesan'olona aman-jatony. Ny tena mampiavaka azy ireo dia ny krizin'ny takalon'aina tao amin'ny teatran'i Môsko sy ny fahirano any Beslan.
Nandray andraikitra tamin'ny fandoavana ny trosa ivelan'i Firaisana Sovietika i Rosia, na dia atsasaky ny isan'ny mponin'i Firaisana Sovietika fotsiny aza ny isan'ny mponiny tamin'ny fotoana nandravana an'i Firaisana Sovietika. Ny tetibola tsy voalanjalanja tamin'izany fotoana izany dia nahatonga ny krizy ara-bola rosianina tamin'ny 1998 izay nampitontongana ny harinkarena faoben'i Rosia.
Tamin'ny 31 Desambra 1999 dia nametra-pialana ny filoha Yeltsin. Nomena an'i Vladimir Putin izay vao voatendry ho praiminisitra ny asan'ny filoham-pirenena. Nahazo ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2000 i Vladimir Putin. Nampitsahatra ny fikomian'ny Tsetsena haingana izy, fa mbola misy herisetra ihany eny amin'ny faritra avaratr'i Kaokazy tsindraindray.
Ny vidin-tsolika lafo ary ny vola kely hery dia narahin'ny fiakaran'ny filàna eo an-toerana, ary ny fividianana entana sy ny famatsiam-bola dia nanampy ny toekarena hitombo nandritra ny sivy taona misesy. Izany zavatra izany dia nampisondrotra ny fari-piainana ary nampitombo ny lanjan'i Rosia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Na dia voatsikeran'ny firenena tandrefana aza ny fiovana nentin'i Putin, dia nahatonga fivoarana sy fahamarinan-toerana ny fitondrany. Izany zavatra izany dia nahatonga azy ho malaza any Rosia.
Tamin'ny volana Marsa 2008 dia lany ho filoham-pirenenan'i Rosia i Dmitry Medvedev, ary voatendry ho praiminisitra i Putin. Niverina ho filoham-pirenena i Putin tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2012 ary notendreny ho praiminisitra i Dmitry Medvedev.
Ny renivohitr'i Rosia sy ny tanàna lehibe indrindra dia Môsko. Ny tanàna lehibe faharoa dia St. Petersburg, izay renivohitr'i Rosia tamin'ny taonjato faha-18 sy faha-19.
Tanàna rosiana misy olona maherin'ny iray tapitrisa no amin'ny filaharany:
Ny faritra andrefan'i Rosia no misy an'i Kaliningrad, izay nantsoina taloha hoe Königsberg. Ny faritra atsinanan'i Rosia dia ny nosy Diomeda, 35 km miala an'i Chukotka (Rosia) ary 35 km avy any Alaska (Etazonia). Ny faritra atsimo no any Kaokazy, eo amin'ny sisintanin'i Azerbaijana. Ny faritra avaratra indrindra dia ny Franz Josef Land any amin'ny Ranomasimbe Arktika, 900 kilometatra avy any amin'ny Tendrontany Avaratra.
Lalampanorenana[hanova | hanova ny fango]
Kolontsaina ary finoana[hanova | hanova ny fango]
Eseky[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosia&oldid=978334"
Firenena mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Mahaleotena
Firenena avy amin'ny FRSS
Voaova farany tamin'ny 9 Desambra 2019 amin'ny 18:19 ity pejy ity.